Article | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More... | Page 4
Home >> Article (page 4)
चितवन आईपुग्यो मंगलम टिम, फिल्म चल्नेमा ढुक्क छन् कलाकार..(भिडियो)
चितवन । पछिल्लो समयकी चर्चित नायिका शिल्पा पोखरेलले निर्माण गरेको पहिलो चलचित्र ‘मंगलम रिलिजको तयारीमा छ ।
चलचित्रको प्रचारका लागि देश दौडाहमा रहेको चलचित्र मंगलम टोलीले मंगलबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चलचित्रको बारेमा जानकारी दिएको हो ।
चलचित्र ‘मंगलम फागुन २५ गतेबाट देशभरी प्रर्दशनमा आउने भएको छ । हेटौडाको प्रचार–प्रसार सकेर ‘मंगलम को टिम आज भरतपुर आइपुगेको हो । चलचित्र मंगलमका कार्यकारी निर्माता छविराज ओझाले आफुले निर्माण गरेको २३ औँ चलचित्र ‘मंगलम अन्य चलचित्र भन्दा फरक रहेको बताएका छन् ।
निर्माता ओझाले चलचित्र बनाउनु आफ्नो पेशा भएकोले राम्रो चलचित्र बनाउनु कर्तव्य रहेको बताउदै चलचित्र मंगलम उत्कृष्ट बनेको दावि समेत गरे । छविराज प्रोडक्शनमा निर्माण भएको यस चलचित्रमा द्धन्द्धका दृश्य नभए पनि चलचित्र भित्र अन्तरसम्बन्ध द्धन्द्ध भने रहेको ओझाले बताए ।
चलचित्र ‘मंगलम युवायुवतीको प्रेम भन्दा पनि आमा छोरा र बुबा छोराको प्रेमकथामा आधारित रहेको निर्देशक नवल नेपालले बताए । चलचित्र ‘मंगलम दर्शकले किन हेर्ने भन्ने प्रश्नमा निर्देशक नेपालले पुस्तकालमा राखिएको मुनामदन किन पढ्ने भनेकोजस्तै रहेको बताए ।
पैसाका लागि भन्दा पनि आत्मा सम्मानका चलचित्र निर्माण गरेको बताउदै निर्देशक नेपालले सामाजिक तथा पारिवारिक कथा बस्तु समेटिएकोले दर्शकले मन पराउनेमा ढुक्क रहेको बताए ।
प्रचारको क्रममानै रहेकी नायिका एवम् निर्मात्री शिल्पा पोखरेलल चलचित्रमा माया प्रेमका कुरामा बढि जोड दिएको र आमाबुवा, दिदिवहिनीसंगै बसेर मजाले हेर्न सक्ने खालको चलचित्र बनेको बताउनुभयो ।
समाजमा घटिरहेको विकृति र दुःख, सुखको सन्तुलन रहेको चलचित्र ‘मंगलम प्रर्दशन पछिको दर्शकको प्रतिक्रियाले आफ्नो अभिनय क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभावसंगै चुनौति बढ्ने नायक पुष्प खड्काले बताए ।
एक करोड भन्दा बढिको लागतमा निर्माण भएको चलचित्र मंगलम काठमाण्डौ र काठमाण्डौ आसपासको क्षेत्रमा ३३ दिन लगाएर छायाँङकन गरिएको हो ।
चलचित्र ‘मंगलम मा पुष्प खड्का, शिल्पा पोखरेल, मिथिला शर्मा, निर शाह, पृथ्वीराज प्रसाई, साम्रागी राज्यलक्ष्मी शाह लगायतको अभिनय रहेको छ । यस चलचित्रको गीत ‘पर्ख पर्ख मायालु युुटुभमा अत्याधिक रुचाइएको छ ।
अनमोलको ‘कृ’ : एक्सनले जोगाउला साख ??
नारायण ढुगाना, चितवन, २७ माघ : करोडौं लगानीमा बनेको भनेर आक्रामक प्रचार गरिएको चलचित्र ‘कृ’ को शुरुआत सुखत हुन सकेन ।
फ्राईडे रिलिज भएको उक्त चलचित्रको मध्यान्हको प्रदर्शन हेर्ने दर्शक चितवनमा सामान्य देखियो । यसअघिका चलचित्र ऐश्वर्य, प्रेम गित २ र म यस्तो गीत गाउँछु कै हाराहारीमा दर्शक आए ।
सम्वाद र पटकथा जम्न नसक्दा कमजोर देखिन्छ । यद्यपि शनिवार दर्शकको भिड बढ्ने अनुमान छ । अभिनेता अनमोल केसीको शिर्ष भूमिका रहेको चलचित्रको प्रस्तुतिमा फकरशैली अपनाउने प्रयास भएपनि वियोगान्त प्रेम कहानीले युगल जोडीलाई खिन्नपार्छ ।
एक्सन मन पराउने दर्शका लागि भने बदलाको कथा समेटिएको उक्त चलचित्र उत्कृष्ट हुन सक्छ । चन्द्र पन्तद्धारा निर्देशित एक्सनले ‘कृ’को साख जोगाउला ? प्रश्न खडा भएको छ ।
बेलायती लाउरेको कथा जोडिएको उक्त फिल्ममा कुनै बेलायतको फुटेज नदेखिनु दुखद छ । रोमान्टिक भूमिकामा खेल्दै आएका अनमोल ‘कृ’मा भने एक्सन अवतार लिएर प्रस्तुत भएका छन् । द्धन्द्धलाई फिल्मका दर्शकले उत्कृष्ट भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
तर डेब्यू नायिका अदितिको ठाउँमा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई दिएको भए अझै उत्कृष्ट हुने प्रतिक्रिया दर्शकको छ । कोतुहल जगाउनसक्ने कयौ सिनमा निर्देशक चुकेका छन् ।
‘कृ’कै लागि शरीर बनाउन निक्कै मेहनत गरेकाले अनमोल केही बर्ष मिडियामा नआएको चर्चा थियो । तर फिल्ममा उनको ईन्ट्री प्रतिक्षित नहुँदा शुरु मै दर्शकलाई असहज लाग्छ । ‘कृ’मा राखिएका ‘यती यती पानी’ लगायत गीतले फिल्मलाई उत्कृष्ट बनाउन मद्धत गरेको छ ।
नायक अनमोल र नव नायिका अदिति बुढाथोकी मुख्य भूमिकामा छन । सुवास ईन्टरटेनमेन्टको निर्माण र द काजोल फिल्मको प्रस्तुति रहेको ‘कृ’लाई भुवन केसी र सुवास गिरीले निर्माण गरेका हुन् ।
यसमा सरोज खनाल र रुपा राना, अनुपविक्रम शाही, कामेश्वर चौरासिया, लक्ष्मी गिरी, अमित गिरी लगायत कलाकार छन् । दुई रुपमा प्रस्तुत भएका नायक केसी मै फिल्म घुमेको छ ।
सुरेन्द्र पौडेलको कथा तथा निर्देशमा चलचित्र बनेको हो । पुरुषोत्तम प्रधानले छायांकन गरेको उक्त चलचित्रमा प्रदिप भारद्धाज र आशिष रेग्मीको पटकथा तथा रेनशा वान्तवाको नृत्य निर्देशन छ ।
अभिनेत्री श्वेता खड्काको चलचित्र ‘कान्छी’को दुवै गीत युट्युबमा हिट
अभिनेत्री तथा निर्मात्री श्वेता खड्काले निर्माण गरेको चलचित्र ‘कान्छी’ गीत संगीतले गर्दा अहिले निकै चर्चामा रहेको छ । अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन पछि उनले पहिलो पटक निर्माण गरेको ‘कान्छी’लाई अहिले बहुप्रतिक्षित चलचित्रको रुपमा हेरिएको छ ।
‘कोहिनूर’ पछि फिल्म निर्माण तथा अभिनयमा फर्किएकी श्वेताको चलचित्र ‘कान्छी’को युट्युबमा सार्वजनिक भएको दुई वटै गीतलाई दर्शक तथा स्रोतले निकै मन पराएका छन् ।
कात्तिक १६ गते रिलिज गरिएको पहिलो गीत ‘चरी चट्ट परी भुरुरु’दर्शक तथा स्रोतामाझ यति लोकप्रिय भैसकेको छ युट्युबमा अहिले सम्म ८० लाख भन्दा बढी पटक हेरी सकिएको छ । ‘चरी चट्ट परी भुरुरु’ गीतमा राजनराज सिवाकोटीको शब्द संगीत रहेको छ भने गायिका अन्जु पन्त र सिवाकोटीले स्वर रहेको छ।
त्यस्तै केहि दिन अघि मात्रै ‘कान्छी’ सार्वजनिक गरिएको ‘कान्छी’ को द्रोस्रो गीत ‘यो जीउ दाउमा लाउने मैंले तिमीलाई मात्र हो’बोको गीतलाई पनि पाच दिनमा १० लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । अर्जुन पोख्रेलको संगीत तथा दयाराम पाण्डेको शब्द र धमेन्द्र सेवानको स्वर रहेको यस गीतले पनि अहिले बजारमा राम्रै चर्चा पाउन थालेको छ ।
मुस्ताङ, अप्पर मुस्ताङ, जोमसोम र राजधानी लगायतका ठाउँमा खिचिएको चलचित्र ‘कान्छी’आकाश अधिकारीको निर्देशन गरेका हुन् । फागुन ४ गते बाट प्रदर्शनमा रहेको ‘कान्छी’को छायांकन पुरुषोत्तम प्रधानले गरेका हुन् । चलचित्र ‘कान्छी’श्वेता सगै दयाहाङ राई अनु शाह, कामेश्वर चौरासिया, प्रज्जवल सुजल गिरी र तेश्रोलिङ्गी अभियन्ता भूमिका श्रेष्ठको पनि अभिनय रहेको छ।
काया फिल्मस्को ब्यानरमा बनेको यस चलचित्रमा श्वेता खड्का र शैलेस खड्काको लगानी रहेको छ ।चलचित्रको सह–निर्माता रविन खड्का रहेका छन् ।चलचित्रमा बनिश शाह र भूपेन्द्र अधिकारीले सम्पादन,हिमाल केसीको द्वन्द्व तथा लेखन यम थापाको रहेको छ ।
अनमोल केसीको ‘कृ’ र महको ‘शत्रुगते’को युट्युबमा भिडन्त जारी
पछिल्लो समय यता नेपाली चलचित्रका गीतले युट्युबमा राम्रै चर्चा पाउन थालेका छन्।चलचित्रको प्रचार प्रसार गर्ने एउटा राम्रो मध्यम बनेको युट्युब टिजर, ट्रेलर भन्दा पनि अहिले गीत सुरुमा बजारमा पठाउन थालिएको छ ।
केही वर्ष अगाडिसम्म आइटम डान्सलाई चलचित्रको प्रचारको सामग्रीका रुपमा लिइन्थ्यो । तर, अहिले गीतको शैलीमा केही फरक छ । आइटम गीतको ठाउँमा नेपाली लोक लयको गीत प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
यो प्रयोग नेपाली चलचित्र उद्योगका प्रायः चलचित्रले गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलादेखि महसञ्चारले सम्म यही प्रयोग गर्न थालेका छन् । नायक तथा निर्माता भुवन केसी पनि यो नयाँ प्रयोगबाट अछुतो छैनन् । अनमोल केसी स्टारर चलचित्रले पनि यही सूत्रलाई अंगालेका छन् ।
चलचित्रको डिजिटल राइट्स लिएर युट्युबमा गीत अपलोड गर्ने र त्यसको भ्युअर्सका आधारमा चलचित्रको हाइप मापन गर्ने प्रचलन मौलाएको छ । तर यही सूत्र प्रयोग गरिएका र गीत हिट भएका चलचित्रले भने दर्शकको मन त्यति धेरै जित्न सकेका छैनन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
रेशम फिलिलि होस् अथवा ‘पुरानो डुङ्गा’, ‘लुट–२’ होस् या ‘२ रुपैयाँ’ कुनैले पनि राम्रो समीक्षा बटुल्न सकेनन् । भलै निर्माताहरुका अनुसार यी चलचित्रले एनिसियल ब्यापार भने राम्रै गरेका थिए ।
अहिले नेपाली चलचित्रका दुई गीत बजारमा चर्चामा छन्, एउटा अनमोल केसी स्टारर चलचित्र ‘कृ’ को ‘यती यती पानी…’ र अर्को हरिवंश आचार्यसहित दीपक र दीपाले अभिनय गरेको चलचित्र ‘शत्रुगते’ को ‘रुपै मोहनी…’ । अंग्रेजी नयाँ वर्षको छेको पारेर युट्युबमा अपलोड गरिएका दुवै गीतले राम्रै दर्शक पनि पाए । युट्युब ट्रेन्डिङमा यी गीतले तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । २४ घण्टामा सर्वाधिक धेरै छिटो हेरिएको रेकर्ड तोेडेको हरिवंशको ‘रुपै मोहनी…’ युट्युबमा ट्रेन्डिङमा एक नम्बरमा पनि आयो ।
तर यसलाई उछिन्दै अनमोल केसीको ‘यती यती पानी…’ एक नम्बरमा आइपुगेको छ । यो डिजिटल प्रतिस्पर्धा हेर्दा हरिवंश र अनमोल केसीबीचको भिडन्त जस्तो देखिएको छ । युट्युब भ्युअर्स पनि यी दुई गीतको त्यति धेरै अन्तर छैन ।यो समाचार तयार पर्दा सम्म ‘यती यती पानी…’ ३० लाख ६० हजार बढी ले हेरेका छन् भने ‘रुपै मोहनी…’ ३० लाख ९५ हजार बढीले हेरेका छन् ।
‘रुपै मोहनी…’ डिसेम्बर २९ मा अपलोड गरिएको हो भने ‘यती यती पानी…’ डिसेम्बर ३१ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । यी दुई चलचित्रको गीत सँगसँगै रिलिज गरिए पनि चलचित्र भने सँगै रिलिज हुँदै छैनन् । ‘शत्रुगते’ चैत ९ गते लाग्दैछ भने ‘कृ’ माघ २६ गते रिलिज हुँदैछ ।
अल्मोडा राना उप्रेती र मिस्टर आरजेको स्वर रहेको ‘कृ’ को गीतमा शब्द तथा संगीत राजेन्द्र भट्टको छ । भिडियोको कोरियोग्राफी रेनशा वान्तवा राईले गरेकी छन् । चलचित्रमा अनमोलसँग अदिती बुढाथोकीले अनस्क्रिन रोमान्स गर्दैछिन् । अनमोल र अदितीसँगै अनुप विक्रम शाही लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।
‘शत्रुगते’ को ‘रुपै मोहनी…’ मा गीतमा टंक बुढाथोकी र मीना निरौलाको स्वर छ । लोकराज अधिकारीको शब्द रहेको गीतमा संगीत पनि टंक बुढाथोकीले नै भरेका छन् । हरिवंश आचार्य, दिपाश्री निरौला, दीपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, पल शाह, आँचल शर्मा, शिवहरी पौडेल लगायतका कलाकार गीतमा फिचर छन् । ‘शत्रुगते’ लाई प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् भने ‘कृ’ लाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् ।
डेढ वोतल भोड्का खाएर वाईल्ड सेक्स गर्न मन लाग्छ – मोडल स्मिता थापा
नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा विभिन्न हर्कत देखाएर चर्चामा आउने नाम हो स्मिता थापा । उनलाई आधार मानेर लेखक राजेन्द्र थापाले खेलौना नामक पुस्तक समेत लेखेका छन् ।
उनै मोडल थापाले डेढ वोतल भोड्का खाएर वाईल्ड सेक्स गर्ने चाहना व्यक्त गरेकीछिन् । पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा थापाले भनिन्,“म ह्विस्कीको पारखी हुँ, मलाई ह्विस्कीको चुस्कीसँगै वाईल्ड भएर सेक्स गर्नमा आनन्द आउँछ ।”
उनले थपिन्,“जाडोमा मलाई खुकुरी रम मनपर्छ, रक्सी पिएपछि सेक्स डिजाएर हुन्छ, त्यसपछि मलाई वाईल्ड भएर सेक्स गर्न मन लाग्छ ।” आफूले अहिलेसम्म विश्वका सवै प्रकारका ब्राण्डेड रक्सी पिईसकेको उनको दाबी छ ।
आफू यो संसारमा रोमान्स गर्नकै लागि आएको दाबी गर्दै उनले भनिन्,“म ईन्जोए गर्ने केटी हुँ, मस्तीमा झुम्ने मलाई आदत लागिसकेको छ, म सेक्सी र ह्याण्डसम केटाको फ्यान हुँ ।” उनले आफ्ना जीवनबाट रोमान्स शब्द झिकिदिए त्यसले जीवनकै कुनै अर्थ नराख्ने बताईन् । एक छोरीकी डिभोर्सी आमा हुन स्मिता ।
तर उनलाई अझैपनि मनमिल्ने सेक्सी एण्ड ह्याण्डसम केटा पाए विवाह गर्ने चाहना छ । पहिलोपटक कसैलाई मन पराएर विवाह गरेकी उनी पतिले धोका दिएपछि विवाह नगर्ने मुडमा थिईन्, तर विस्तारै रोमान्समा झुम्मिन बानि लागेपछि अब त्यही डिसिजनमा नअडिने उनको सोचाई छ ।
पतिले आफूसँग विवाह गरिसकेपछि पनि अर्के केटीसँग रोमान्स गरेको थाहा पाएपछि अलग भएको अनुभव सुनाईन् । त्यही बखत आफूले “लोग्ने होईन, लोग्नेमान्छे चाहिन्छ” भनेको सन्दर्भ कोट्याईन् ।जीवन धान्न त्यति गाहे छैन उनलाई । तीन तीन वटा बिजनेस रन गरेर बसेकीछिन् । उनको व्युटि पार्लर, रेष्टुरेण्ट र म्यानपावरको व्यवसाय छ । मनग्गै आम्दानी भैरहेको छ ।
लगानी अनुसारको आउटपुट आईरहेकोमा उनी खुशी छिन् । कर्ममा विश्वास गर्ने उनी फलको कहिल्यै आशा नगर्ने गिताको सारमा विश्वास गर्छिन् । अन्त्यमा उनले भनिन्,“अरु त त्यस्तै हो, जीवन खुशी छ, रोमान्स भैरहेको छ, यसरी नै बाँकी जीवन बितोस्, मेरो यही चाहना ।”
धमलाको हमलामा सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ किन डाको छोडेर रोए (भिडियो)
हाँस्यकलाकार सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुन्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले निर्माण गरिरहेको चन्द्रपुरस्थित सन्तपुरमा एकीकृत नमुना बस्तीको काम अन्त तिर पुगेको छ ।
असोजको २८ गतेबाट विविध रुपमा कम्पाउण्डको पर्खालबाट कार्य थालनी गरिएको बस्तीमा भ्यु टावर र मन्दिरको काम बाहेक अरु सबै कामहरु अन्तिम चरणमा पुगेको बताईएको छ ।बस्तीमा ४७ वटा घर, सामुदायिक भवन, मन्दिर र बगैंचा लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । गिटी, बालुवा, सिमेन्ट खरिद देखी बोक्ने सम्म धुर्मुस आफैं खटिएका छन् ।
बस्ती निर्माणका लागि दैनिक दुर्इ सय ६१ जना कामदार खटिरहेका छन् । राष्ट्रिय गान गाएर हरेक दिन बस्तीमा काम सुरु गरिन्छ ।माघ २४ गते बस्ती हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएकाले बस्ती सोचेभन्दा चाँडो निर्माण भइरहेको धुर्मुसको दाबी छ ।
पत्रकार ऋषि धमलासंग हिमालय टिभी को कार्यक्रम धमलाको हमलामा अन्तर्वार्ता दिदै गर्दा सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ डाको छोडेर रोए । आखिर किन रोए ?
ऋषि धमला र सिताराम कट्टेल अर्थात् ‘धुर्मुस’दुबैले आ-आफ्नो पहिचान बनाएका छन् ।ऋषि धमला एक चर्चित पत्रकार हुन भने सिताराम कट्टेल एक कलाकार मात्र नभई समाजसेवक पनि हुन ।
सलमान खानसँग दीपिका पादुकोण किन फिल्म खेल्दिनन् ?
सलमान खानसँग फिल्म खेल्न जो कोही कलाकार पनि मरिहत्ते गर्छन्। तर, बलिउड फिल्म उद्योगमा एक दशक विताइसकेकी अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले ‘दबंग’ नामले चिनिने अभिनेता सलमानसँग अझै फिल्म खेलेकी छैनन्।
शुक्रबारबाट उमेरले ३२ पुगेकी दीपिकाले सलमानसँग फिल्म खेल्ने प्रस्ताव आएपनि लगातार अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आजसम्म सलमानसँग फिल्म खेल्न उनको साइत नै जुरेन। अर्थात समय अभावका कारण उनले सलमान अभिनित कैयौं फिल्म रिजेक्ट गरिन।
यद्यपी उनले बलिउड बादशाह शाहरुख खानसँग भने विभिन्न फिल्ममा अभिनय गरिन्।
कुन कुन फिल्म रिजेक्ट गरिन ?
२०१६ मा प्रदर्शनमा आएको सलमानको फिल्म सुल्तानमा हिरोइनका लागि दीपिकालाई ५ पटकसम्म प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, समय नभएको भन्दै उनले अस्वीकार गरिन्। त्यसपछि अनुष्का शर्मा हिरोइनका रुपमा देखिइन्।
२०१६ मै प्रदर्शनमा आएको सलमानको सुपरहिट फिल्म ‘बजरंगी भाईजान’ मा पनि दीपिकालाई हिरोइनका लागि अफर गरिएको थियो। तर, उनले नभ्याउने भनेपछि करिना कपुरलाई हिरोइन बनाइयो।
२०१४ मा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘जय हो’ मा पनि दीपिकालाई प्रस्ताव गरियो। यो पनि उनले अस्वीकार गरिन। त्यसपछि सलमानसँग अभिनेत्री डेजी शाह देखिइन्।
२०१४ मै प्रदर्शनमा आएको ‘किक’ मा पनि दीपिकालाई सलमानको जोडी बनाउन खोजिएको थियो। तर, यसबेला दीपिका शाहरुख खानको फिल्म ‘ह्याप्पी न्यू इयर’मा व्यस्त हुँदा खेल्न पाइनन्। ज्याकलिन फर्नाडिजले सलमानसँग खेल्ने अवसर पाइन्।
दीपिकाले २०१५ मा प्रदर्शन भएको सलमानको ‘प्रेम रतन धन पायो’ फिल्म पनि अस्वीकार गरिन्। त्यसपछि सोनम कपुरले हिरोइनको भुमिका निभाइन्।दीपिकाले सलमानका साथै आमिर खानको ‘धुम ३’ फिल्म समेत समय अभावका कारण अस्वीकार गरेकी थिइन्।नागरिक
‘फिर्के’ रिलिजको मिति घोषणा, यस्तो छ पोष्टर
चलचित्र फिर्केको रिलिज मिति घोषणा गर्दै निर्माण पक्षले पहिलो पोष्टर सार्वजनिक गरेको छ । पुष १४ गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै फिल्म ‘फिर्के’का दुई पोस्टर सार्वजनिक भएका हुन् ।
‘ईकुु’को नामले चर्चित सुलेमान शंकरको प्रस्तुतिमा फिर्के बनेको हो । फिल्ममा अर्पण थापा, सुलेमान शंकर, ऋचा शर्मा, क्रिष्टिना पौडेल, बिष्णु सापकोटा, अर्जुन गुरुङ्, उज्ज्वल भण्डारी, पुरन थापा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
यो फिल्मलाई तितो सत्य, जिरे खुर्सानी लगायतका टेलिसिरियलमा ‘बेमान’को नामले परिचित रवि डंगोलले निर्देशन गरेका हुन् । उनले यसअघि ६ वटा नेवारी फिल्म पनि निर्देशन गरिसकेका छन् ।
यसअघि ईकु र ईकु २ फिल्मका निर्माता समेत रहेका कलाकार सुलेमान शंकरले ‘फिर्के’मा ईकु भन्दा फरक भूमिकामा अभिनय गरेको बताए । यो फिल्मका निर्माता ओमलाल गुरुङ् र राजेश श्रेष्ठ हुन् । फिल्ममा अभिमन्यू निरबीको लेखन रहेको छ ।
अष्ट महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन रहेको ‘फिर्के’मा मित्र डि गुरुङको सम्पादन तथा राम कुमार केसीको छायांकन छ । फिल्मलाई काठमाण्डौ उपत्यकामा गोपाल कायस्थ र मोफसलमा एफ डि कम्पनीले वितरण गर्दैछन् । बिश्व नेपाली र सुवास भुषालको संगीत रहेको यस फिल्ममा दुई गीत रहेका छन् ।
पुष २८ मा ‘रज्जा रानी’ आउँदै, यसरी भयो टिजर सार्वजनिक
आगामी पुष २८ गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै फिल्म ‘रज्जा रानी’को टीजर सार्वजनिक भएको छ । नायक नाजिर हुसेनलाई प्रस्तुत गर्दै रज्जा रानीको टीजर सार्वजनिक गरिएको हो । नायक आर्यन सिग्देलको होम प्रोडक्शन हाउसबाट निर्मित यो फिल्मलाई याम थापाले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मको कथा निर्देशक थापा आफैको हो ।
सानो भेगको जनजाति कथामाथि निर्माण भएको फिल्मलाई रमेश एमके पौडेलले निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा ताराप्रकाश लिम्बु र दीपक शर्माको संगीत, पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन, कविराज गहतराजको नृत्य निर्देशन रहेको छ ।
फिल्ममा केकी अधिकारी, नाजिर हुसेन, कामेश्वर चौरासिया, लक्ष्मी बर्देवा, संगीता नापित, अरुण रेग्मी, दीपक क्षेत्री, विनोद निरौला, अनोज पाण्डे, अशोक आचार्य, अनुज थापा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ ।
डरलाग्दो रुप लिएर आईन ‘सुनकेशरी’
आधा लभुमार्फत फिल्म निर्माणमा पनि हात हालेकी नायिका ऋचा शर्मा निर्मित तथा अभिनित फिल्म ‘सुनकेसरी’को नयाँ पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । फिल्मको सार्वजनिक पोष्टर निकै डरलाग्दो बनाइएको छ । अझ, नायिका ऋचाको रुपले त अझ सबैलाई चकित बनाउँछ । पोष्टरबाटै के प्रष्ट हुन्छ भने ‘सुनकेसरी’ हरर फिल्म हो ।
यसअघि निर्माण पक्षले एक बालिका फिचरिङ फिल्मको फस्ट लुक पोष्टर सार्वजनिक गरेको थियो । ऋचाले अष्ट्रेलियामा बस्दै आएका भीम न्यौपानेसँगको सहकार्यमा ‘सुनकेसरी’ निर्माण गरेकी हुन् । फिल्मका निर्देशक अर्पण थापा हुन् । ऋचा शर्मा, भीम न्यौपाने, रबिन्द्र झा लगायतका कलाकारहरुको फिल्ममा अभिनय छ ।
यो फिल्ममा अष्ट्रेलियन दरबार बुटिक होटलका पहिलो पाहुना र भुतप्रेतबीचको गतिविधीलाई मुख्य कथा बनाइएको हो । सम्पूर्ण छायांकन अष्ट्रेलियामा भएको यो फिल्मको बजेट २ करोड बताइएको छ । फिल्ममा शर्मिला सापकोटा र धर्मराज अधिकारी सह(निर्माताको रुपमा छन् भने कार्यकारी निर्माताको रुपमा मनोज अधिकारी र अर्पण थापा छन् ।
फिल्मको प्रदर्शन मिति भने घोषणा गरिएको छैन । यतिबेला ‘सुनकेसरी’ सम्पादन टेवुलमा छ ।